၅သန်းသောဖောက်သည်များက FBSကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်!
ယခုအချိန်အခါကတော့ -FBSမှာ ထရိတ်ဒါ ၅သန်းပြည့်မြောက်သွားတဲ့အချိန်ပါ! ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေဟာဆိုရင် တစ်နေ့တာစကတည်းက ဖောက်သည်တွေကို အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် အမြတ်ရအောင် ဘယ်လိုဝန်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာကို အမြဲစဉ်းစားတွေးတောကြံဆကာ အစီအစဉ်များစီစဉ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်. ထရိတ်ဒင်းစည်းကမ်းချက်များ ပရိုမိုးရှင်းအသစ်များ ငွေပေးချေသည့်စနစ်အသစ်များကို တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန်စီစဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပြီး ဖောက်သည်များ၏ အကြံပေးချက်များ အကြံဉာဏ်ကောင်းများကိုအမြဲကြိုဆိုနေလျှက်ရှိပါသည်!
၅သန်းပြည့်ထရိတ်ဒါကတော့ သူဟာကံထူးရှင်ဆိုတာ မသိသေးပါဘူး ကျွန်တော်တို့က ထိုကံထူးရှင်ကို အကြောင်းကြားပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ်လက်ဆောင်တွေ စီစဉ်ပေးသွားမှာပါ.
ဒီအချိန်အခါမှာတော့ FBSက အလွန်ထူးကဲတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခု ချီးမြှင့်ပေးတော့မှာပါ. ဘာလို့လဲဆို ၅သန်းဆိုတဲ့အရာက တကယ့်ကိုထူးခြားလို့ပါ. မကြာခင်မှာပဲ အသေးစိတ်အကြောင်းစုံကို ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်. စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ!